Dacwad aan horey loo arag oo loo gudbiyay Maxkamad kutaala Hargeysa | Udugland.com
Dacwad aan horey loo arag oo loo gudbiyay Maxkamad kutaala Hargeysa
Maxkamad kutaala magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa loo gudbiyay dacwad nooc cusub ah oo ka dhan ah Mehrad ganacsi oo kutaala magaaladaasi.
Garyaqaan Mubaakar Cabdi ayaa Maxkamada Hargeysa u gudbiyay dacwad ka dhan ah Mehrada Berbera Cafe ee kutaala magaalada Hargeysa, waxaana mehradan lagu dacweeyay takoor ay kula kacday wiil naafo ah.
Dacwadan oo ah mid nooceeda uu ku cusub yahay magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa mehradan ganacsi lagu eedeeyay in ay takoor kula kacday wiil dhalinyaro ah oo kamid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Maxkmada ayaana la filayaa in ay u fariisato kiiskan una yeerto maamulka Mehrada dacwada ee takoorka lagu soo eedeeyay, waxaana talaabadan lagu dacweeyay mehradan ganacsi ayaa si weyn waxaa usoo dhaweeyay dad badan oo arintaasi maqlay.
Dastuurka u qoran maamulka Somaliland ayaa qoraya in mamnuuc ay tahay in takoor nooca uu doonaba lagula kaco bulshada, waxaana deeganada maamulkaasi mararka qaar ka dhaca falal kusabsan takoor bulsho oo saameeya dadka naafada ah iyo dadka kale aan kasoo jeedin maamulka Somaliland.